Izinkinga zokukhulisa izingane ziyimibuzo ephakade. Umzali ngamunye ngokushesha uzobhekana nezinkinga zokungalaleli, ukuziphatha okungafanelekile kwezingane zakhe, ukuntuleka kokuxhumana nokuqonda okufanayo.
Yiziphi izimiso eziyinhloko zokukhulisa izingane emndenini, ngokucabangela izinto zangempela zokuphila kwethu kwanamuhla? Ake sizame ukuqonda lokhu kunzima, njengokubonisa imibukiso, umbuzo.
Into ebaluleke kakhulu ekuthuthukiseni noma yikuphi ukukhuliswa, kuhlanganise nemfundo yomndeni, kugcina ukuxhumana nomntwana. Ngeke kube khona othintana naye, akukho ithuba lokuzwa omunye nomunye, udonga lokungaqondani luzovela, bese kuhlukaniswa phakathi komuntu omdala nomntwana. Lokhu kuyiqiniso ngokuvamile kuvame ukukhula, uma kukhona ukwephulwa kwezibopho ezivamile ezingokomzwelo phakathi kwabazali nezingane ezikhulile. Ukulindele ukuthi azibonele njengomuntu omdala okhulile, kodwa abazali bakhe namanje (ngokuvame ukuzibandakanya) bamqonde njengengane, banikeze iseluleko asibonayo kabi. Konke lokhu kwephula ukuxhumana ngokomzwelo, okuvimbela inqubo eqhubekayo yemfundo. Eqinisweni, liyeka.
Ukugcina uxhumano nengane (kungakhathaliseki ukuthi wakhulela eminyakeni yobudala noma okwamanje) ngokuqondile kuxhomeke ekuziphatheni kwamalungu omndeni omdala. Ingane uxhumane ekuqaleni. Uvulekile kunoma yiziphi izinhlobo zokuxhumana okuhle nabazali. Okunye okuwukuthi thina ngokwethu sivame ukuphula ukuvumelana kokuqala kobudlelwane. Siyakhathazeka ngokungahambi kahle kanye nokusheshisa kwezingane, ukukhishwa kwentsha kanye nokufakazela kwabo abadala. Ngokuvamile, esikhundleni sokuxhumana okunomthelela nengane ezinhlobonhlobo zezinkhulumomphendvulwano noma umsebenzi ohlangene, sibalekela kuhlobo "lwegobolondo" lokungafuni ukusebenzisana. Sivame kangakanani ukukhuluma ngesifiso sethu sokuhlala sisodwa? Imisho efana nokuthi "ngishiye ngedwa", "yiba nesineke", "linda", njll. sinikeze ukungafuni kwethu ukukhombisa umcabango nokuseka ukuxhumana nomntwana. Futhi kaningi nakakhulu sifuna okufanayo okungekho amazwi, ngosizo lwesimo sobuso, ukuzithokozisa.
Eqinisweni, izimiso eziyisisekelo zokukhulisa izingane emndenini
ukulindela kwethu okuhle kwemiphumela yale nqubo kusemgqeni. Sifuna ukubona kanjani izingane zethu esikhathini esizayo? Umusa, othakazelisayo, ophendula inkathazo yomunye umuntu futhi evikela izikhundla zabo kuleli zwe, evulekile futhi ngesikhathi esifanayo aqaphe futhi ahlakaniphile. Kodwa ukuze ufeze lezi zinhloso, kwanele ukukhombisa izingane ukuthi zenze njalo usuku nosuku, zizondla imodeli yezinkambiso ezinjalo zokuziphatha. Kodwa kunzima kanjani ukubona lokho kuyiqiniso, ngoba asiphelele! Ngaki kaningi, esikhundleni sezinto ezinhle, izibonelo ezingenakubukeka kahle zokuziphatha okuhle, izingane zethu zisibona njengabantu abaziphatha kahle, abangabatshela kahle ukuthi baziphathe kanjani, kodwa ngokuvamile abaziqinisekisi lezi zimiso ekuphileni kwabo kwansuku zonke. Kubalulekile ukuzama ukuqeda lo mkhuba. Ngempela, izingane zethu zilungele ukuphendula kunoma yiziphi izinguquko ezinhle!
Yiqiniso, izimiso eziyisisekelo zonke zokufundisa (ikakhulukazi umndeni) kufanele zisekelwe othandweni. Kodwa-ke, uthando emndenini luchaza ukuthethelelwa kwecala, kanye nesijeziso esinengqondo sokungaziphathi kahle; kanye nobuhlobo bokuthula, nesiyalo kanye nokusizwa kwabanye; isimo esihle nesimo esihle kanye nokulondolozwa kobuholi bendabuko phakathi kwamalungu omndeni. Lokhu okubaluleke kakhulu kubantwana. Kubaluleke kakhulu kubo (ngokwanele nokuthuthukiswa kwengqondo nokuthuthukiswa komuntu siqu) ukuzwa ngempela ukuthi upapa uyinhloko yomndeni, umthengisi nomvikeli; Umama ungumsizi wakhe othembekile nomuntu ofanayo. Izingane zithatha lezi zimiso. Futhi akukhathaleki ukuthi emndenini bobabili ubaba nomama basebenza. Ngokuphambene nalokho, kubalulekile ukugcizelela (ekusebenzelaneni nengane, ikakhulukazi ezincane) ukuthi umtholi oyinhloko emndenini ngubaba, kumele abe nesihawu, asize futhi alalele. Umama akasebenzi kahle kangaka, indima yayo eyinhloko ihambisana nezingane. Khumbula ukuthi uma uqala ukwethula ubukhulu bomndeni ngenye indlela (umama ubaluleke kakhulu kunapapa noma afana nokulinganayo), igunya labazali bobabili emehlweni omntwana lizokwehla. Ngenxa yalokho, ungabhekana nokulalelwa kokubili (kufaka phakathi ukubonisa), futhi nokuphazamiseka kokuxhumana okuphilile phakathi kwabazali nezingane. Ngokuvamile, awudingi!
Yiqiniso, futhi ngaphandle kwezinhlobo zendabuko zokukhulisa izingane emndenini
asikwazi ukwenza. Izincazelo zikaMama, ezibhekiswe esikoleni samabanga aphansi, isibonelo, nendlela yokuziphathisa nokuthi kungabi kanjani, zisabalulekile. Kuphela akufanele kube kakhulu. Uma kungenjalo ngeke uzwakale, kodwa uzozama ukukhohlwa masinyane ama-verbose obhalwe phansi. Njengomthetho, ukusetshenziswa njalo kwezindlela ezinjalo ekusebenzeni kuholela emiphumeleni ephikisanayo, futhi ukukhulisa kuhluleka.
Ukuba khona kwezingane eziningana emndenini kusiza kakhulu inqubo yonke yokukhulisa. Ochwepheshe bathi bakwanele ukukhulisa ingane esebekhulile ngokufanele, ukutshala kuyo uthando olwengeziwe nokusekela (ngenkathi kugcinwa isiyalo esifanele kanye nobuhlobo obuhle ngokujwayelekile). Izingane ezincane, ikakhulu uma zikhona ezingaphezu kweyodwa zazo, zizothola amasampula wokuziphatha kwayo, zikopishe ngendlela elula futhi elula, kalula futhi ngokwemvelo zifunde imigomo yokuxhumana nelungu ngalinye lomphakathi, imithetho yokuziphatha nokusebenza okusebenzayo ngaphakathi kweqembu, njll. Okufanayo kuqinisekiswa ngumkhuba weminyaka eminyaka wokukhulisa izingane emasikweni wendabuko, kuhlanganise nasekhaya lethu. Kungaba kuhle ukuthatha okuthile ezenzakalweni ezinhle zezihlanganiso zezizukulwane ezedlule ezinsukwini zethu!
Indlela yokukhuluma nezingane mayelana nobuciko?
Usuku lokuzalwa lokuqala: nabantwana noma abadala?
Izenzo zokuzivocavoca izingane ezingaphezu konyaka ongu-1 ubudala
Ukuthuthukiswa kwengane ezinyangeni eziyisishiyagalombili
Amaphupho okwesabekayo nokuqothulwa kwabantwana
Izici zokulahlekelwa kwesisindo emva kweminyaka engu-40
Indlela yokuthuthukisa inkumbulo nokunakwa kwengane?
Forshmack kusuka herring namazambane
Izinhlobo zezinwele ezivumelekile
Pancake namazambane nama-parsnips
Ukubikezelwa kwezinkanyezi ngamathole ka-2010
Yini amadoda abona njengowesifazane ongcono?
Ikhalenda lokukhulelwa: amasonto angu-11
I-Zucchini efakwe ngamakhowe
Indlela yokuhlela iholidi lezingane ekhaya